Abalandeli beZombie: Abafileyo bahamba kwihlabathi lokuThengisa abaPhembeleli | Martech Zone
Abalandeli beZombie: Abafileyo bahamba kwihlabathi lokuThengisa
Lwesine, Okthobha 29, 2020 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 UHarleen Dorka
Udibana neprofayili yeendaba ezentlalontle enenani elingaphezulu komndilili wabalandeli, amawaka ezinto ozithandayo, kunye namava obambiswano lwentengiso - trikha okanye uphathe kakuhle?
Ngenani le Iimpembelelo zentengiso Ukuqhubeka nokuphakama, akuqhelekanga kakhulu ukuba iimveliso zibe lixhoba lenkohliso yeeakhawunti kunye nabalandeli bobuxoki kunye nabaphulaphuli abathembekileyo.
Ngokutsho I-Hub yokuthengisa ukuthengisa:
Intengiso ephembelelayo isethwe ukuba ikhule ibe malunga ne- $ 9.7B kwi-2020.
300% ngaphezulu iimpembelelo ezincinci Zisetyenziswa ziifemu ezinkulu kunango-2016.
Phantse iipesenti ezingama-90 zawo onke amaphulo ashukumisayo abandakanya Instagram njengenxalenye yomxube wentengiso.
Ubuqhetseba obunempembelelo Yinkxalabo ekhulayo kubaphenduli ngaphezulu kwe-2/3 yabaphenduli abanamava kuyo.
Oko akutsho ukuba bonke abaphembeleli be-macro bawela kolu luhlu. Ngapha koko, ii-apile ezimbi zimbalwa kwaye zikude kwaye zininzi kakhulu kunalezo zinyanisekileyo kwaye zinokuthenjwa ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqonda ngokuthe ngqo ukuba ungayikhetha njani impembelelo enezona njongo zibalaseleyo zakho kunye negama lakho.
Ngoku, asizami ukoyikisa nabani na kude nentengiso yempembelelo. Ngokuchasene noko. Ukucela uncedo lwearhente yokuthengisa enefuthe kunokunceda iimveliso ukuba zifumane iimpembelelo kubaphulaphuli abathembekileyo nabanyanisekileyo abaya kuthi bancede benze imbuyekezo encomekayo kutyalo-mali.
Imidiya yokuncokola yenye yezona zinto ziphakathi ziye zafumana ukukhula okungalinganiyo kwiinyanga ezidlulileyo. Nawuphi na umthengisi unokubona ukuba umsebenzi wentengiso kwiqonga le-Intanethi kufuneka ube yinxalenye yesicwangciso sophawu esiya phambili. Kwaye ubambiswano olunempembelelo yenye yezona ndlela zisebenzayo kunye neendlela eziphilayo zokusebenzisa ukwenza kanye loo nto.
U-Amelia Neate, uMlawuli oyiNtloko Umququzeleli womlingisi
U-Amelia akalunganga. Ngapha koko, ukuthengisa okuphembelelayo yeyona ndlela ikhula ngokukhawuleza yokufumana abathengi kwi-intanethi, nge 22% wabathengisi bakwayibiza njengeyona ineendleko ezifanelekileyo.
Kwaye ngenxa yoko, 67% Abathengisi kwiimveliso kuluhlu lwamacandelo balungiselela ukwandisa inkcitho yabo kwintengiso kwiinyanga ezili-12 ezizayo.
Kodwa, njengoko iimveliso ziqala ukunyusa i-ante ngemisebenzi yempembelelo, u-Amelia ucacisa indlela yokwenza okuninzi kwiphulo lokuthengisa elinempembelelo, uqinisekisa ukuba lisebenza ngokusemandleni.
Uloyiko Lomlandeli Wobuxoki
Abalandeli benkohliso kunye nezikhokelo ezifileyo zivela ngeendlela ezininzi. Ngokudume kakhulu, abalandeli abathengileyo yenye yezona zinto zixhaphakileyo, apho abantu beqa umsebenzi onzima obandakanyekayo ekunyukeleni kwinkqubela phambili yemidiya yoluntu, endaweni yoko, bahlawule abalandeli bobuxoki ukuze benze iakhawunti yabo ibonakale inkulu kunokuba injalo.
Ngelixa le nto iba yinto egwetyiweyo bobabini abasebenzisi kunye neempawu, ngaphandle kokuba zifunyenwe, kunokuba nzima ukwahlula isibalo sokwenene sabalandeli esingeyonyani.
Olunye uhlobo lomlandeli wobuxoki yiakhawunti ebingasebenzi kangangexesha elide, nokuba kungenxa yokuba umntu ulibele ngayo, akasenamnqweno wokuyisebenzisa kodwa akayicimanga iprofayile, okanye kungenjalo.
Kodwa ngaphandle kwesizathu, iakhawunti engasebenziyo inokuchaphazela kakubi ukulinganiswa kokubandakanyeka.
Ukuqaqambisa indlela okunokuba yingozi ngayo kwiimpawu, isifundo sifumanise ukuba banokubaninzi 95 million bots bezibanga njengabalandeli bobuxoki kwi-Instagram kuphela, bexabisa amashishini i-1.3 yezigidigidi kwimikhombandlela kunye nelahleko.
Ukulwa neziphumo ezibi ezinale nto kwintengiso, ukusebenzisa ubuchule bearhente yokuthengisa enefuthe kunokunceda ukubeka iingqondo ekuphumleni nasekuqinisekiseni ukuba iphulo liya kufikelela kumawaka, ukuba ayizigidi zabalandeli abazibandakanye kakhulu.
Kukho amatyala aliqela kule minyaka idlulileyo apho abantu abanesimo sempembelelo bafunyenwe benetyala lokuthenga abalandeli bobuxoki ukuphucula umbono wamandla abo kunye nokuduma kwabo kumaqonga.
Umzekelo, iBake Off's UPaul Hollywood wazifumana ekwisikhalazo somlandeli wobuxoki xa wayethathe ikhefu ku-Twitter emva kokuba umlandeli wakhe wabala ekuvukeni kwendawo yenethiwekhi yokuncokola esusa iiakhawunti ezingezizo eqongeni.
Olunye uphononongo lubonisa ukuphakama okumangalisayo Ipesenti yomlandeli ongeyonyani yabaphembeleli abadumileyo, abanjengoKourtney Kardashian kunye nabanye abaphembeleli bemidiya yoluntu.
Yinombolo nje ekupheleni kosuku, akunjalo? Kodwa ngokubhekisele kwiimpawu, oku kufuneka kusete iintsimbi zealam zokukhala. Xa i-brand ikhupha umkhankaso wempembelelo, benza njalo phantsi kwengcinga yokuba uphawu lwabo luya kufikelela kubaphulaphuli ababanzi- kunye nomntu obandakanyekileyo kuloo nto. Abaphembeleli banokuhlawulisa isixa esikhulu semali ngeposi enye kuphela, ke iimveliso kufuneka ziqiniseke ukuba imbuyekezo, umzekelo, ukufikelela okanye ukubhencwa abaya kukufumana, inkulu ngokwaneleyo ukuze ichaze inkcitho.
U-Amelia Neate, uMlawuli oyiNtloko kwi-arhente yentengiso ephembelelayo, Umququzeleli womlingisi
Ke, yintoni ekufuneka yenziwe ngamaBrand?
U-Amelia ucacisa ukuba kukho izinto ezininzi ekufuneka ujonge kuzo xa usebenzisana nomphembeleli.
uthethathethwano -Endaweni yokugxila kubalo lwabalandeli, beka ukubaluleka okukhulu kumanqanaba okuzibandakanya. Ngelixa ubungakanani babaphulaphuli iphulo lakho elifikayo linokuba lincinci, abo bafikelela kubo kunokwenzeka ukuba banxibelelane nayo. Kwaye yindlela oya kuthi uphumeze ngayo iziphumo kwaye uhlangane neenjongo zakho zokuthengisa.
Abaphembeleli abancinci -Abaphembeleli abancinci bathambekele ekubeni nenqanaba eliphezulu lokuzibandakanya. Nangona ingekho nkulu, abaphulaphuli babo ngokubanzi bayasebenzisana kwaye bayinyani kwaye ke, banokubonakalisa ukuba babaluleke ngakumbi kwiimpawu.
azithandayo Ngelixa zikhona izixhobo phaya zokujonga amanqanaba okuzibandakanya, ungaqhuba uphando lwakho ngokuthelekisa ukubalwa komlandeli kwinani lezinto ezifunwayo zizithuba ezithunyelwayo.
izimvo -Ukuba awukaqiniseki malunga nokuba semthethweni kwefuthe, amagqabantshintshi yenye into exelayo. Jonga ukuba, okokuqala, bayafumana naziphi na izimvo kwaye okwesibini, nokuba ngaba zikhona iipateni okanye izinto ezifana nogaxekile kuzo. Umzekelo, amagqabantshintshi koko kubonakala ngathi ngabasebenzisi abohlukeneyo, kodwa bonke bafunda ngokufanayo, kunokwenzeka ukuba babe zi-bots.
Ngenye indlela, unokucela uncedo lwe-arhente kwimikhankaso yakho. Kunye nezixhobo kunye nokuqonda kwemizi-mveliso, iiarhente zinokufikelela kwisixa esikhulu sedatha ukunceda iimveliso ngeempumelelo zephulo labo. Iiarhente zentengiso ezinefuthe ngokwakha zakha kwaye zikhulise ubudlelwane obomeleleyo nabashukumisayo, abaziyo ukuba banokulandelwa okuqinisekileyo kunye nenqanaba lokuzibandakanya.
Ke, ngaphambi kokuba unkqonkqoze kwiminyango yeeprofayili zemidiya yoluntu ngoncedo ngephulo lakho elilandelayo lokuqhubela phambili, qiniseka ukuba utyalomali lwakho luya kudibana nokuphatha hayi amaqhinga. Ukufumana ulwazi oluthe kratya:
Ndwendwela umlingisi ophembelelayo
tags: Amelia kakuhleukuzibandakanyaubuqhetseba obunempembeleloukuthengisa okunempembeleloumququzeleli womlingisiUKourtney kardashianimpembelelo enkuluUmphembeleli omncinciPaul hollywood
UHarleen Dorka ngumbhali onamava womxholo ojolise ikakhulu kwizihloko ezinxulumene neendlela zedijithali zonxibelelwano kunye nokusetyenziswa. Unobuchule obuthile bokuzisa iingcinga zobunkokeli bokucinga kunye neengcinga ebomini kwilizwi elibhaliweyo ngokwenza izinto ezilungiswe kakuhle neziphandiweyo kuluhlu lwamashishini kubandakanya: ukuthengisa kunye nemithombo yeendaba zentlalo, imikhwa yabathengi, ukuveliswa kwetekhnoloji, ukuthengisa kunye nokuthengisa uphawu kunye nezinye izinto ezininzi. amacandelo.
Ngaphambili: Fumana umbono oBelwanayo woNxibelelwano lwakho lweNtengiso